FFKM : Hanongam-panjakana? -
AccueilRaharaham-pirenenaFFKM : Hanongam-panjakana?
Namoaka ny fanambarana mikasika ny fiainam-pirenena ny FFKM, fanambarana mahery vaika miampanga tanteraka ny fitondrana ankehitriny ho tsy nahavita na inona na inona, ho mpivarotra tanindrazana mihitsy aza ary raha tsy misy fitandremana dia toa mitaona sy mamporisika ny olona ho any amin’ny fanapahan-kevitra hitera-doza ho an’ny firenena sy ny vahoaka.
Notanisain’ny FFKM tao ireo zava-misy eo anivon’ny fiainam-piangonana, toa ny famakiana sy fandrobana ary fangalarana ny Fanaka Masina, ny famonoana mpitondra fivavahana, fandorana Baiboly izay fototry ny finoana Kristiana ka nilazany fa « midika ho fiantsiana sy famakiana ady amin’ny mpanara-dia an’i Kristy ».
Fa adinon’ny FFKM ny nanambara ireo fahalovana mitranga eny anivon’ny Fiangonana raha tsy hiresaka afatsy ny fijangajangan’ny mpitandrina ka mampisara-bazana ny mpino. Tsy mahagaga rahatoa ka mandringa ny Fitoriana ny Filazantsara, mety antony mahatonga ny « fikomiana sy ny fivadihan’ny firenena amin’Andrianamanitra », araka ny hita ao amin’ilay fanambarana nataon’ny FFKM izany.
Miantso ny mpitandro filaminana hanohy ny fanadiovana anatiny sy ny fanitsiana ireo diso lalana ny FFKM. Niaraha nandre angamba ny fanambarana nataon’ny SEG, ny jeneraly Gerard Randriamahavalisoa, izay nilaza marindrano fa tsy handefitra amin’ireo zandary mandika lalàna ary hanao fanadiovana goavana eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena ary manao fitetezam-paritra manerana ny Nosy mihitsy amin’izao fotoana izao.
Mipetraka ny fanontaniana manao hoe : « Tokony hijanona eo anivon’ny mpitondra ihany ve izany fanadioavana izany sa tokony hanao toa izany koa ny mpitondra Fiangonana, manana fahavononana hanadio ny ao anatiny koa ve FFKM? ».
26 Janoary sy 7 febroary
Nandriaka ny rà nanomboka ny faha-26 Janoary 2009. Tafakatra hatrany amin’ny 500 ny aina nafoy teto, voaroba sy may avokoa ny tanàna. Mbola nandriaka indray koa ny rà ny faha-7 Febroary 2009, am-polony maro ireo maty sy nitondra takaitra. Nanao fanambarana teo anatrehan’izany ve ny FFKM? Tsy ny tamin’ny taona 2009 ihany fa hatrany amin’ny taona 2002, nifandrafy ny samy Tafika sy ny vahoaka, vonoan’olona sy fanolanana nanerana ny Faritra maro, nomena vahana ny fandrobana sy ny herisetra. Fa taiza ny FFKM tamin’izany fotoana izany?
Aim-bahoaka an-jatony no maty nandritra iny fanonganam-panjakana ny taona 2009 iny. Voalazan’ny FFKM ny hoe “mihemotra ny rariny ary mijanon-davitra ny hitsiny”. Tsy mendrika ny hitaky ny rariny sy ny hitsiny ve izany ireo fianakaviana namoy ny havany? Koa nahoana no tsy andrenesam-peo momba izany FFKM hatramin’ny androany?
Tsy vitan’ny hoe tsy nandrenesam-peo ny FFKM teo anetrahan’ireo zava-doza maro nitranga teto amin’ny firenena fa mbola notondroin’ny olona ho mpomba ireny mpanongam-panjakana ireny mihitsy aza (2002-2009) ny mambra sasany. Trafika sy fitantanana
Tapitra niresaka sy nampaneno lakolosy mikasika ny trafika-na “bois de rose” avokoa ireo fikambanana iraisam-pirenena nandritra iny Tetezamita iny. Fa tsy mbola niantso ny vahoaka tahaka ny nataony tamin’ity fanambarana farany ity mihitsy ny FFKM, mety manamarina ny ahiahin’ny olona tamin’izany fotoana ny amin’ny fanohanan’ny mpitondra Fivavahana sasany ao anatin’ny FFKM ny fitondran’ny mpanongam-panjakana.
Notapahan’ny Banky Iraisam-pirenena sy ny FMI ny fanampiana an’i Madagasikara ny taona 2008 noho ny gaboraraka sy ny fanodinkodinana volam-panjakana nividianana ireny Air Force One II ireny fa na teny indraim-bava monja aza tsy re tamin’ny FFKM.